▄ သရီးစီ နှင့် ချည်းကပ်နည်း သုံးသွယ် – Min Thayt
ကျနော်စာရေးရင် သုံးတဲ့နည်းတချို့ရှိပါတယ်။ အဲသည့်အထဲက အချက် (၃) ချက်ကို နည်းနည်းပြောချင်ပါ တယ်။ စာကို တကယ်ရေးတတ်လာတဲ့လူတွေတော်တော်များများဟာ၊ စာရေးနည်းကို သိလို့ ရေးတတ်လာ တယ်ဆိုတာထက် ဖတ်ပါများရင်း၊ နာနာဖတ်ရင်း၊ ရေးကျင့်များလာရင်း လက်က အလိုလို ကလောင်ကို စမ်း မိ လာတာများပါတယ်။ ကျနော်လည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပါပဲ။ စာရေးနည်းကို သိလို့ စာရေးတာထက်၊ ရေးရင်း သိလာတာ၊ ဖတ်ရင်း နားလည်လာတာ၊ ရေးပါများလို့ အလိုလို လက်က နားလည်လာတာလို့ ပြောချင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို စာသိပ်ရေးတတ်သူလို့တော့ မယူဆပါဘူး။ လူနားလည်အောင် ရေးတတ်တဲ့အဆင့်တော့ ရှိတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ထားတော့။
ကျနော် ပြောချင်တဲ့ စာရေးရင် သုံးတဲ့နည်းလို့ပြောရင်လည်း ရနိုင်တယ်။ ဒါမှမဟုတ် ကျနော် စာရေးရင် များသောအားဖြင့် ချည်းကပ်လေ့ရှိတဲ့ အချက် (၃) ခုလို့ ပြောရင်လည်း ရတယ်။ ဒီအချက်က ပိုပြီးတော့ နည်း စပ်မယ် ထင်တယ်။ နည်းနာဆိုတဲ့စကားလုံးထက် ချည်းကပ်တဲ့ပုံစံ (၃) ခုလို့ ပြောရင် ပိုသင့်တော်၊ ပိုလျော်ကန် မယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
စီသုံးလုံးလို့ နားလည်နိုင်ပါတယ်။ “သရီးစီ”ပေါ့။ 3C ။
• Classification (သရုပ်ခွဲတာ)
• Comparative (နှိုင်းယှဉ်ပြတာ)
• Contradiction (ထိပ်တိုက်တွေ့တာ)
ဒါကတော့ စာရေးတဲ့သူတိုင်းလိုလို သုံးဖြစ်တဲ့နည်းလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကျနော်က ဆောင်းပါးတွေ အရေးများ တော့ ဒါမျိုး ပိုပြီး ချည်းကပ်သုံးလေ့ရှိပါတယ်။ ဆောင်းပါးဆိုတဲ့သဘောက၊ ဝေဖန်ဆန်းစစ်တာပါသလို၊ သုံးသပ် ကောက်ချက်ပြုရတာလည်းပါတယ်။ ထိုနည်းလည်းကောင်း ရှင်းလင်းတင်ပြရတာမျိုးလည်းပါပါတယ်။ ဒီတော့ ဆောင်းပါးမှာ၊ critic (ဝေဖန်တာ)၊ evaluation (သုံးသပ်တာ)၊ explain (ရှင်းလင်းပြတာ) စတဲ့အချက်သုံးချက် က အလိုလို ပါနေပြီးသားဖြစ်နေပါတယ်။
ဝေဖန်ဖို့အတွက် သီအိုရီ၊ ပေတံ၊ နှုန်းစံ၊ အခြေခံတန်ဖိုး၊ မူဘောင်တစ်ခု၊ စည်းမျဉ်းတစ်ခုခု၊ ခံယူချက်၊ ယုံကြည်ချက် တစ်ခုခုကို အခြေပြုရတယ်။ ဆိုလိုတာက ထိုင်ထားရတယ်။ ထိုင်ထားတဲ့ အခြေခံ တစ်ခုခု၊ ဒါမှ မဟုတ် အခြေပြုရပ်ခံချက်တစ်ခုခု ရှိမထားဘဲနဲ့ အသားလွတ်ဝေဖန်ဖို့ ခက်တယ်။ တနည်းအားဖြင့် ဝေဖန်တယ် ဆိုတာကိုက နှုန်းစံတစ်ခုခုနဲ့ ယှဉ်ပြီး တိုက်တာ၊ ထုတာ၊ ချေဖျက်တာ၊ အကဲဖြတ်တာ၊ တန်ဖိုးဖြတ်တာ။ ဒါ့ကြောင့် ဆောင်းပါးတစ်ခုမှာ အခြေပြုတန်ဖိုး တစ်ခုခုတော့ ပါဝင်ရလေ့ရှိတယ်။
ဘယ်လိုအခြေခံတန်ဖိုး၊ တနည်း အခြေခံအယူအဆ မဆို လွတ်လပ်စွာ ဆုပ်ကိုင်နိုင်တယ်။ လွတ်လပ်စွာ အထိုင်ပြုနိုင်တယ်။ နှုန်းစံတစ်ခုခုကို လွတ်လပ်စွာ ဆုပ်ကိုင်ထားနိုင်တယ်။ ပေတံတစ်ချောင်းချောင်းကို ကိုင် ထားနိုင်တယ်။ ယုတ်စွအဆုံး ဘယ်နှုန်းစံကိုမှ မကိုင်ခြင်းသည်ပင် နှုန်းစံပေတံ၊ အယူအဆတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါ တယ်။ ထားတော့။
ဒီနေရာမှာ ပြောချင်တာက…. ဝေဖန်အကဲဖြတ်တာမှာ ဆက်စပ်နေတဲ့အကြောင်းအခြင်းရာကို ရှင်းလင်းတင်ပြ တာဖြစ်ပါတယ်။
သုံးသပ်တယ်ဆိုတာ ကောက်ချက်ချတာဖြစ်ပါတယ်။ သိုင်းဝိုင်းကောက်ယူပြီးတော့၊ ကြောင်းကျိုးဆင်ခြင်ပြီး တော့ အကဲဖြတ်တာ၊ တန်ဖိုးသတ်မှတ်၊ နေရာသတ်မှတ်တာ၊ အဆင့်သတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ သုံး သပ်ချက်ကောင်းထွက်ဖို့အတွက် ဝေဖန်မှုက နက်နဲဖို့ လိုလာပြီ။ ဝေဖန်မှုကို တွန်းတွန်းတိုက်တိုက်လုပ်နိုင်ဖို့ လိုပြီ။ အပေါ်ယံရှပ်ကြည့်လို့ မရတော့ဘူး။ အတွင်းထဲထိ နှိုက်ရတော့မယ်။
ဝေဖန်ခြင်းလုပ်ရတာဖြစ်တာကြောင့် သီအိုရီ၊ နှုန်းစံ၊ တန်ဖိုး၊ အခြေခံအယူအဆ စတဲ့ အရာတစ်ခုကို သုံးရပြန် ရော။ သီအိုရီခိုင်ခိုင်မာမာကို ကိုင်ပြီး ဝေဖန်နိုင်ရင် သုံးသပ်ချက် ရလဒ်ကောင်းထွက်မယ်။ သီအိုရီတွေကို ဆက်စပ်သုံးနိုင်လေလေ ဝေဖန်မှုအဆင့်မြင့်လေလေဖြစ်ပြီး၊ သုံးသပ်ချက် အဖြေကောင်းတွေ၊ ကောက်ချက် ကောင်းတွေ ပိုထွက်နိုင်လာလေလေဖြစ်တယ်။ ဒီအချက်တွေဟာ တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု ဆက်စပ်နေတယ်။
ဒီတော့ ဒီနေရာမှာ သုံးသပ်ချက်ဟာ ခိုင်ဖို့အတွက် ထောက်ရမယ့် ဒေါက်တွေ လိုလာပြန်ရော။ ဒီဒေါက်တွေဟာ အချက်အလက်တွေကို ဘယ်လောက်သုံးနိုင်သလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာ မူတည်နေတယ်။ အချက်အလက်တွေကို ဘယ်လို ထားသို သုံးစွဲသလဲဆိုတာနဲ့လည်း သက်ဆိုင်နေတယ်။ ဒီတော့ အချက်အလက်တွေကို ကြောင်းကျိုး ညီညီ တွဲဆက်တင်ပြရတယ်။ ဒါကို ရှင်းလင်းတင်ပြတယ်လို့ ခေါ်တယ်။
အကြောင်းအရာတစ်ခုကို နားလည်ဖို့၊ ကောက်ချက်တစ်ခုခု၊ သုံးသပ်မှုတစ်ခုခုကို ခိုင်မာစွာ ထောက်ပြဖို့ သီအိုရီ ကိုချည်းပဲ သုံးရတာ မဟုတ်သေးဘူး။ သီအိုရီကို ဖြည်ထုတ်ဖို့အတွက် အချက်အလက်တွေကို အစားထိုးပြီး ရှင်း လင်းတင်ပြရတယ်။ အချက်အလက်တွေနဲ့ သီအိုရီဟာ ဟပ်မိသွားပြီ၊ တွဲမိသွားပြီ၊ အချိတ်အဆက်မိသွားပြီဆို ရင် ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း လုပ်ငန်းဟာ ပြီးစီးတယ်။
ဒီတော့ ရေးသားခြင်းအတတ်မှာ ရှင်းလင်းတင်ပြတတ်ဖို့ လိုပြန်ရော။ ရှင်းလင်းတင်ပြနိုင်ဖို့အတွက် အချက် အလက်တွေကို စုဆောင်းရှာဖွေပြီး ဆက်စပ်တင်ပြ၊ ကြောင်းကျိုးညီညီရှင်းလင်းပြဖို့ လိုပြန်ရော။ ဒီနည်းနဲ့ စာတစ်ပုဒ်ကောင်းဖြစ်လာတော့တာပါပဲ။
ဝေဖန်တာ၊ သုံးသပ်တာနဲ့ ရှင်းလင်းတင်ပြတာတွေဟာ ကျနော်ချည်းကပ်တဲ့ “သရီးစီ” ချည်းကပ်နည်းကို သုံးတဲ့ နေရာမှာ ထည့်သွင်းလုပ်ဆောင်ရတဲ့အချက် (၃) ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ သရီးစီကို ထပ်သွားကြအုံးစို့။
သရုပ်ခွဲတယ်ဆိုတာ အမျိုးအစားခွဲတယ်၊ အတန်းအစားသတ်မှတ်တယ်၊ အဆင့်သတ်မှတ်တယ်၊ မျိုးတူစုခွဲ တယ်၊ နယ်ပယ်သတ်မှတ်တယ်၊ ကာလသတ်မှတ်တယ်၊ ဓာတ်ခွဲတယ်…. စသည်ဖြင့် အဓိပ္ပာယ်ဆောင်ပါတယ်။ သရုပ်ခွဲခြင်းဟာ စာရေးခြင်းမှာ အထူးလိုအပ်တယ်။
• စရိုက်သဘာဝတွေကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြရတယ်။
• အမျိုးအစားတွေ မတူကြောင်း ရှင်းလင်းပြရတယ်။
• နယ်ပယ်ကဏ္ဍတွေ ကွဲပြားကြောင်း စိတ်ဖြာရတယ်။
• သဘောသဘာဝမျိုးကွဲတွေကို ရှင်းလင်းပြရတယ်။
ဒီတော့ သရုပ်ခွဲဖို့အတွက် ဗဟုသုတလိုလာပြီ။ ဗဟုသုတဆိုတာ သာမန်ညောင်ည ဗဟုသုတမျိုးကို ဆိုလိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ စာကို အပျင်းပြေ ကောက်ဖတ်တဲ့သူက သရုပ်ခွဲ စိစစ်နိုင်မှုကို လုပ်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီတော့ အတွင်းနှိုက်ပြီး နက်နက် ဖတ်တတ်တဲ့အကျင့်ရှိတဲ့သူသာလျှင်၊ သရုပ်ခွဲစိစစ်မှုကို ကောင်းကောင်းနားလည်နိုင် တယ်။ စာဖတ်ရင် အာရုံစူးစိုက်စွာ သမာဓိတည်ပြီး ဖတ်တတ်တဲ့အကျင့်ကို မွေးမြူထားခြင်းက သရုပ်ခွဲတတ်တဲ့ စွမ်းရည်၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်မှု စွမ်းရည်ကို မြင့်မားစေလိမ့်မယ်။
သရုပ်ခွဲမှုတွေ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင်၊ နှိုင်းယှဉ်ပြရတာတွေ ရှိတယ်။ ကိုယ်ပြောချင်၊ ကိုယ်ဗဟိုပြုချင်၊ ကိုယ်ထောက်ပြချင်တဲ့အချက်ကို ပိုခိုင်မာစေဖို့၊ ပိုထင်ရှားစေချင်လို့ နှိုင်းယှဉ်ပြရတာတွေ ရှိတယ်။ တုတ် တစ်ချောင်းဟာ ကောက်နေသလား။ ဖြောင့်နေသလားဆိုတာကို ငြင်းနေမယ့်အစား၊ သူ့ထက် ဖြောင့်တဲ့ တုတ် တစ်ချောင်းနဲ့ ဘေးချင်း ယှဉ်ပြလိုက်ခြင်းအားဖြင့် သိသာထင်ရှားသွားတယ်။ ဒါဟာ နှိုင်းယှဉ်ခြင်းရဲ့ အကျိုး ကျေးဇူးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ နှိုင်းယှဉ်လေ့လာခြင်း နည်းနာကို နားလည်ဖို့ လိုပြန်ရော။
နှိုင်းယှဉ်လေ့လာခြင်းဟာ အသိပညာရှာဖွေတဲ့နည်းနာမှာ သိပ်အရေးကြီးတယ်။ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ နယ်ပယ် တော်တော်များများမှာ comparative study approach နဲ့ လေ့လာဆန်းစစ်ထားတာတွေ အများကြီးပဲ။ ဒါဟာ သုတေသနမှာ သုံးတဲ့နည်းလို့လည်း ပြောလို့ရတယ်။ ထားတော့။
ဒီနေရာမှာ စာပုဒ်အတွက် ….
• စရိုက်တွေကိုပဲ နှိုင်းယှဉ်မလား၊
• အခြေအနေတွေကိုပဲ နှိုင်းယှဉ်ပြမလား၊
• အမျိုးအစား တွေကိုပဲ နှိုင်းယှဉ်ပြမလား၊
• ခေတ်ကာလကိုပဲ နှိုင်းယှဉ်ပြမလား၊
• တန်ဖိုးချင်းပဲ နှိုင်းယှဉ်ပြမလား၊
• ရလဒ်ချင်းပဲ နှိုင်းယှဉ်မလား၊
အမျိုးမျိုး နှိုင်းယှဉ်လို့ရပါတယ်။ ဒီတော့ နှိုင်းယှဉ်ခြင်းနည်းနာ၊ တနည်း နှိုင်းယှဉ်တဲ့ ချည်းကပ်ပုံဟာ စာရေးခြင်း မှာ သိပ်အရေးပါတယ်။ သိပ်အရေးကြီးတယ်။ ဒါကို နားလည်သဘောပေါက်ထားရင် ကောင်းတယ်။
ထိပ်တိုက်တွေ့တာဟာ တနည်းအားဖြင့် ဖြိုဖျက်ဖို့အတွက် သုံးတာပဲ။ တွန်းတာပဲ။ တိုက်တာပဲ။ ဖြိုတာပဲ။ ဖျက် တာပဲ။ တနည်းအားဖြင့် တိုက်ခိုက်ခြင်းပဲ။
ကျနော်ဟာ ဆောင်းပါးတွေ အရေးများတော့၊ ဒီနည်းကို အလိုလိုထည့်သုံးဖြစ်တယ်။ တနည်းအားဖြင့် ဝေဖန် ရေးဆောင်းပါးတွေနဲ့ လူမှုပြုပြင်ရေးဆောင်းပါးတွေ၊ နိုင်ငံရေးဝေဖန်ချက်တွေကို ရေးတဲ့အခါ ဒီချည်းကပ်ပုံဟာ လိုကို လိုလာတယ်။ ဒါဟာ ရန်လိုခြင်း၊ ရန်ထောင်ခြင်း မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလည်း နားလည်လိုတယ်။
အယူအဆတစ်ခု၊ အကြောင်းအရာတစ်ခုကို တင်ပြတဲ့အခါမှာ အကြောင်းရှိပါတယ်။ အဲဒီ့အကြောင်းကတော့ ရိုးရှင်းပါတယ်။ အဓမ္မကို ဓမ္မနဲ့ တိုက်ခိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ မတရားမှုကို တရားမှုနဲ့ ဖြိုဖျက် နင်းချေရတာပဲဖြစ်ပါ တယ်။ ဒီတော့ အယူအဆဖျင်း၊ အယူအဆညံ့၊ လုပ်ရပ်ဆိုး၊ အမူအကျင့်ဆိုး၊ စရိုက်ဆိုးကို လမ်းကြောင်းတည့် မတ်ဖို့အတွက် ထိပ်တိုက်တိုးကြရတာပါပဲ။ တိုက်ခိုက်ရတာပါပဲ။
နောက်အနက်တစ်မျိုးက… နှဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ခိုင်မာစွဲမြဲပြီး ချေချွတ်ရခဲ့တဲ့ အဟောင်းတွေထဲက အယူဝါဒဆိုး တွေကို တိုက်ဖျက်ဖို့အတွက် စကားလုံးတွေနဲ့ နှဲ့ရတယ်။ တွန်းရတယ်။ ယိုင်အောင်လုပ်ရတယ်။ ဒါမှသာ အဟောင်းက ပြိုပြီး အသစ်ဖြစ်ထွန်းမယ်။ လောင်းရိပ်မိနေတာတွေအတွက် အရိပ်မိုး၊ အရိပ်ထိုးနေတာတွေကို တွန်းရတိုက်ရပါတယ်။ ထိပ်တိုက်တွေ့ပြီးရေးတာဟာ တော်လှန်ရေးသဘောလည်း ဆောင်တယ်။ ဖြိုဖျက်ရေး သဘောလည်းဆောင်တယ်။
ဒီနေရာမှာ အရေးအသားမတတ်ရင်၊ အရေးအသား မသိမ်မွေ့ရင် ရန်ပွဲတွေ ဖြစ်တတ်တယ်။ ပြဿနာကို မီးထွန်းရှာသလိုဖြစ်တတ်တယ်။ ပဋိပက္ခကိုဖြစ်စေတတ်တယ်။ ဒါတွေ အားလုံးဟာ ဆိုးတယ်လို့ မဆိုနိုင်သလို၊ အားလုံးဟာ ကောင်းတယ်လို့လည်း မဆိုလိုဘူး။ ဒီတော့ အသိဉာဏ်အားဖြင့်၊ အတွေးအခေါ်အားဖြင့် တွန်းတိုး နေတာဟာ အပြုသဘောအားဖြင့် ကောင်းတယ်။ အသိဉာဏ်ထဲမှာ ဦးနှောက်ထဲမှာ တည်ဆဲ အညစ်အနွမ်း ဟောင်းတွေကို ဖြိုဖျက်ပစ်မှ အသိသစ်၊ အမြင်သစ်၊ ဉာဏ်သစ်ဟာ ထွန်းလင်းမယ်။
စာရေးဆရာဟာ မကောင်းမှုတွေနဲ့ အဓမ္မမှုတွေကို တွန်းလှန်ဖြိုဖျက်တဲ့နေရာမှာတော့ လက်မနှေးသင့်ပါဘူး။
ဒီလို အတွေးအခေါ်တွေ ၊ အိုင်ဒီယာတွေ တွန်းထိုး ယှက်ရှယ်ရင်း ဉာဏ်အလင်းတွေ ပွင့်လာတယ်။ ရီနေးဆန့် ခေတ်ဟာ ရောက်လာတာပဲ။ ဘဝမှာလည်း ဘဝရီနေးဆန့် အခြေအနေတွေဖြတ်သန်းရအုံးမယ်။ လူ့အဖွဲ့ အစည်းဟာ ဒီနည်းနဲ့ အတွေးအခေါ် ပွင့်လင်းလွတ်လပ်ပြီး သီးပွင့်လာကြတာပဲ မဟုတ်လား။
ဒီလောက်ဆို နားလည်နိုင်ပြီ ထင်ပါတယ်။
နံနက် ၂း ၂၂
၉ ၊ အောက်တိုဘာ၊ ၂၀၂၀။
Tagged Library, Life of Writer, Literature, Mood for Writer, Writer, Writing, Writing Method, Writing Work
Previous post ▄ နီတိ လေးပါး၊ အပြုံးသက်သေ
Next post ▄ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် သို့ /